Fizahantany: miisa 38 000 ny asa very | NewsMada
Notsorin’ny minisitry ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM), Randriamandranto Joel, omaly, fa taona mafy indrindra eo amin’ny sehatry ny fizahantany iny 2020 iny. Satria izay vao nisy izany hoe nikatona ny sisin-tany nandritra ny 10 volana. Tsy teto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao.
Manodidina ny 40 000 ny asa mivantana amin’ny fizahantany, ankoatra ny asa tsy mivantana mifandray aminy. Nilaza ny mpikambana ao anatin’ny Fiombonamben’ny federasiona mikasika ny fizahantany eto Madagasikara (CTM) fa voatery nesorina amin’ny asany, noho ny antony teknika, hatramin’ny nisian’ny fihibohana, vokatry ny Covid-19. Miisa 38 000 izany, tombanana ho ny 70%-n’ny mpiasa.
“Mila atao mafy ny ezaka amin’ity taona ity satria ahina tsy hiditra intsony na hihemotra amin’ity sehatra ity ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola”, hoy ny minisitra. Nilaza ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny CTM, Rtoa Raveloson Aina, fa tsy maintsy karohina miaraka amin’ny mpiara-miombona antoka samihafa ny paikady hitazonana ny asa. Tsy azo tanterahina anefa izany raha sy miverina misokatra ny sisin-tany, izay tsy maintsy iaraha-midinika tsara amin’ny tompon’andraiki-panjakana voakasika rehetra.
Hodinihina indray ny hetra sy ny trosa
Hojeren’ny CTM koa ny tontolon’ny vola. Toy ny lafiny hetra, efa neken’ny fanjakana ny nanemorana ny fotoana fandoavan-ketra tamin’ny taona 2020 teo. Eo koa ny faktiora Jirama, ny trosa nindramina tany amin’ny banky, sns. Tsy mbola miverina amin’ny laoniny anefa ny fihariana, koa, tsy maintsy hiverenana hifampidinihana indray.
Orinasa madinika sy tantanana olona tokana ny ankamaroan’ny sehatry ny fizahantany. Fitsinjovana azy ireny no anisan’ny tena imasoana.